ဈေးဝယ်စင်တာ၌ကစားရန်ကလေးများအတွက်ဘောလုံးရေကန်နှင့်အပြန်အလှန်ကစားနည်းများပါသောအိမ်တွင်းကစားကွင်းသုံးပစ္စည်းများ၊ တရုတ်ရေကူးကန်နှင့်ကစားကွင်းသုံးပစ္စည်းများနှင့်အတူကလေးများအတွက်ဈေးဝယ်စင်တာများတွင်ကစားရန်ကစားသူများ၊ ရောင်း ၀ ယ်သူများ၊ စက်ရုံ - Kaiqi
ဈေးဝယ်စင်တာ၌ကလေးများကစားရန် ball pool နှင့်အပြန်အလှန်ကစားနည်းများပါသောအိမ်တွင်းကစားကွင်းသုံးပစ္စည်းများ
အသက်အရွယ် Group မှ:
ပလပ်စတစ်အစိတ်အပိုင်းများ၊ အတွင်းပိုင်းပူဖောင်းရုပ်ရှင်၊ အပြင်ဘက်ရှိရုပ်ရှင်ကိုကျုံ့ပါ
သတ္တုအစိတ်အပိုင်းများ: အတွင်းမှ Cotton & bubble film၊ အပြင်ဘက်ကိုကျုံ့ထားသောရုပ်ရှင်
ငွေသွင်းလက်ခံသည့်နေ့မှ ၄ ပတ်အကြာ
၃၀% စပေါ်ငွေ၊ ၇၀% ကိုပစ္စည်းမပို့ခင်ပေးချေပါ
It’samiddle sized indoor playground with the maze playground with obstacles and some soft play, one big ball pool, with these various play elements, the whole playground enables the kids of different ages to play happily. In the main maze playground, kids shall across the obstacles, climb up the “mountains”, go through the punching boxes and slide down from the tube slide or the interactive slide. There’s projection over the interactive slide that when kids slide down, the images showed on the slide will respond relatively according to the games that are playing, so children will be very excited and interesting to play with it. They also can doalot of play games inside it such as climbing, hiding, riding etc. It will make them feel fully enjoyed their childhood time, meantime during playing, they not only get fun, it will help themalot:
၁။ ကလေးငယ်များ၏ neurobehavioral ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုမြှင့်တင်ပါ။
သွပ်ရည်စိမ်သံမဏိပိုက်များ၊ အမျိုးသားနံရံနှင့်အညီ ၂.၂ မီလီမီတာအထူ
ပုံမှန် GB/T3091-2001၊ 0.45 mm PVC အမြှုပ်ဖြင့်အုပ်ထားသော
ပျော့ပျောင်းသောအစိတ်အပိုင်းများ၊ အတွင်းဆုံး - သစ်သား၊ အလယ် - ရေမြှုပ်; အထွက်ဆုံး - PVC
Samsung LLDPE မှတင်သွင်းသည်
တောက်ပသောအရောင်၊ ယူနီဖောင်းအထူနှင့်မြင့်မားသောပလပ်စတစ်အပိုင်း (Standard GB / T 4454-1996)
အစားအစာအဆင့် LLDPE သည်ကလေးများအားကြီးထွားမှုအတွက်ပိုမိုလုံခြုံ၊ ကျန်းမာ၊ ပျော်ရွှင်စေသောပရဒိသုကိုပေးသည်။
အချင်းရှိလမ်းကြောင်းပြကြိုး: ၁၆ မီလီမီတာ (သံမဏိဝါယာကြိုး ၆ ကြိုးပါရှိသည်)
ကျောင်းများ၊ ပန်းခြံများ၊ အပန်းဖြေနေရာများ၊ ဟိုတယ်များ၊ တိုက်ခန်း၊ ရပ်ရွာ၊ နေ့ကလေးထိန်းများ၊ ကလေးဆေးရုံများ၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊ စူပါမားကတ်များ
ရွေး & ကိုးကား
E-Mail က [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
လျ+ 86 021-67848111
မူပိုင်ခွင့် ၂၀၂၁ © KAIQI Group Co. , Ltd. By.INJNET
မင်းရဲ့လာမယ့်ပရောဂျက်တွေအကြောင်းအသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုငါတို့ကိုပို့ပြီးငါတို့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအကြောင်းမေးခွန်းတွေကိုအခမဲ့မေးပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ရက်အတွင်းသင့်အားပြန်ကြားလိမ့်မည်။ မင်းရဲ့သတင်းစကားအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။